Wararka Maanta: Axad, Apr 17, 2022-Guddoomiye gobolka Gedo: Raysal Wasaare Rooble wuxuu godob aan haridoonin ka galay shacabka Garbahaareey
Guddoomiye Buule ayaa nasiib darro ku tilmaamay inuu raysal wasaare Rooble godob ka galayo shacabka iyo maamulka Garbahaareey, isagoo sheegay inuu Garbahaareey ka dhigay meel bahalo galeen ah oo aan lagu qaban karin wax doorasho ah.
“Inaad umad dhan masiirkeeda ugu awood sheegato mandate-ka laguu dhiibay, waa dhibaaatooyin aan haridoonin,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Gedo.
Wuxuu sheegay guddoomiyuhu in aysan ka haridoonin matalaadooda. Wuxuu sheegay inay diyaariyeen goobihii doorashada lagu qaban lahaa, ayna soo dhoweynayaan cid kasta oo ka qeyb qaadanaysa qabsoomida doorashada.
Hadalka guddoomiyaha ayaa kusoo beegmaya, xilli guddiga doorashada uu go’aamiyay in doorashada lagu qabto magaalada Ceelwaaq, iyagoo sheegay in Garbahaareey aanay ka jirin nabad galyo la isku halayn karo oo doorashada lagu qaban karo.